Uyenza njani iphethini kwi-Illustrator | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyenza njani iphethini kwi-Illustrator
Arnau Aparisi | | Umzekeliso, Iipateni, Tutorials
Iintsuku ngaphambi kokuba sikunike ipakethe engaphezulu Iimpawu ze-300 ezinesitayile yoyilo olusicaba simahla.
Namhlanje ukunika umdlalo othile esikulethela wona, esi sifundo sendlela yenza ipateni ngokulula kakhulu kwi-Illustrator. Izibonelelo kunye nezixhobo ezisinika iipateni azinakuphela, ukusuka kongeze ukuthungwa kwindawo enesithukuthezi neflethi, ukuze sikwazi ukwenza iphepha lethu lokusongela elilelakho ukulungiselela iminyhadala, imihla yokuzalwa okanye ii-odolo zokupakisha.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukwenza ifayile ye itafile yokusebenza entsha Kwi-Illustrator, kwimeko yam ndithathe isigqibo sokwenza itafile kubungakanani be-A4, kodwa ungakhetha eminye imilinganiselo.
Ngaphakathi kwitheyibhile yomsebenzi kufuneka senze ifayile Isikwere sama-200px X 200pxLo mlinganiso uyabonisa, kodwa ndikucebisa ukuba wenze isikwere ngenani elilula, kuba emva koko kuyakufuneka songeze kwabanye.
Nje ukuba isikwere sethu senziwe kufuneka siye kwithebhu jonga -> bonisa igridi, emva koko ubuyele kwiscreen jonga-> snap kwigridiNje ukuba kwenziwe oku, kufuneka sihlengahlengise isikwere kwigridi uqobo, kufuneka silumke xa uyihambisa ukuze ingakhubazeki, kungenjalo ipateni yonke iya konakala.
Sikhetha a umbala obonakalisayo kwesikwere, akukho mfuneko yokuba le ibe ngumbala wethu wokugqibela njengoko ibonisa kuphela.
Sakha i umaleko omtsha Kwi-Illustrator kunye nocingo apho isikwere sikhona, siyayivimba, oku kuya kusebenza njengesikhokelo kwaye kuya kuthintela isikwere ekuhambeni ngexesha lokwenziwa kwepateni.
Yonke into engaphakathi kwesikwere iya kubandakanywa kwipatheni yethu, ukuba iyaphuma inxenye kuyakufuneka senze uhlengahlengiso oluthile.
Kwimeko apho isekoneni, kufuneka siyiphinde into leyo izihlandlo ezininzi, ke sinika ulawulo / cmd + c kwaye emva koko uye ku ulawulo / cmd + f Ukuncamathisela kwindawo enye, ukuba ikona kwikona sicinezela ulawulo / cmd + f iqhosha kathathu.
Sikhetha into size siye kuyo tshintsha ithebhu, apho siza kufumana uthotho lweendawo zokulungelelanisa, khumbula ukuba u-X ulungelelwaniso lubhekisa ngasekhohlo nasekunene, ngelixa ulungelelwaniso lwe-Y lubhekisa phezulu nasezantsi, kwezi zilungelelaniso Kufuneka songeze kuphela i-200px (umlinganiso wesikwere) de into yekona iphindaphindwe kuzo zone iikona.
Ukuba Izinto ziphuma kuphela kwicala elinye lesikwere Kuya kufuneka senze inkqubo efanayo, ngeli xesha kuphela kufuneka ziphindaphindwe kwicala elinye.
Emva kokuba sizalise isikwere, sivula umaleko wesikwere le sisusa umbala kwaye sikhetha yonke into, zombini ii icon kunye nesikwere kwaye ngokuthe ngqo siyirhuqela kwisampulu yefestile yethu.
Isampulu iya kusivumela ukuba sigcwalise naluphi na uhlobo lwefom, senze ipatheni ezenzekelayo eya kuthi isindise ixesha elininzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyenza njani iphethini kwi-Illustrator
Ndinengxaki ngefotoshop, xa ndigqithisela iipatheni ukusuka kumzobi ukuya kwifoto, ndifumana le migca phakathi kwepateni kunye nepateni kwaye kufuneka ndiyisuse ngesandla. Ngaba ikhona indlela yokuba bangaphumi ngqo?
Ewe, ngaphambi kokuba uthethe nantoni na, sele ndidibanise yonke into kunye ne-pathfinder
Sawubona Ruben, ngaba zincinci kakhulu? Ukuba kunjalo, zama ukuthumela ngaphandle ngaphandle kokujonga imigca, kukho amaxesha apho zibonwa kuphela ngelixa sisebenza nenkqubo. Kodwa kusenokwenzeka ukuba xa ubeka isikwere usibeke ngomgca okanye kunjalo, zama ukwenza uvavanyo kwasekuqaleni ukuba ukuthumela ngaphandle akusebenzeli, usenokuba ulibele inyathelo, umbuliso!
Iifonti zasimahla zaBaqulunqi
UMariano Peccinetti kunye nokuziqhelanisa nokwenza ikholaji